Umhlaba oMhlophe ngokubanzi - uRann wase Kutch. Intlango eNgcwele yaseIndiya
Indian Visa ekwi-Intanethi yenza ukuba iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela zikwazi ukufumana I-eVisa India okanye iVisa ye-elektroniki ye-India ye Abakhenkethi, iiShishini kunye noTyelelo lwezoNyango ukuya eIndiya. Urhulumente waseIndiya Indlela ekucetyiswa ngayo kukufaka isicelo kwi-intanethi kwi Indian Visa ekwi-Intanethi Website. Unokufumana iVisa yaseIndiya ngekhompyuter kwiimfuno ezingxamisekileyo nge-imeyile ngaphandle kokuba yekhuriya ipaspoti yakho. I-imeyile kunye nedebhithi esebenzayo / ikhadi lekhredithi okanye iakhawunti ye-Paypal zezona mfuno zifumanekayo I-Visa yeshishini laseNdiya, I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya or I-Visa yezonyango yaseIndiya nge imeyile.
I-Rann yeKutch yintlango emhlophe kuphela eIndiya kwaye yenye yezona ntlango zinkulu zetyuwa emhlabeni. Ezona ntlango zinkulu zetyuwa kwihlabathi liphela zikwindawo ezahlukeneyo, kunye neendawo ezimhlophe zesanti ezimhlophe zeKut kuphela kwentlango yetyuwa e-Indian subcontinent.
Ifunyanwa kwintshona yeIndiya kwiphondo laseGujarat, i U-Rann wase Kutch wahlulwe waba ngamacandelo amabini aphambili abizwa ngokuba yiGreat Rann kunye neLittle Rann.
Amasimi emigxobhozo yetyuwa ahlula indawo phakathi komda weIndiya nePakistan ngasentshona, kunye nemilambo emininzi emantla kunye neGulf of Kutch ebekwe emazantsi.
Nangona indawo eyinkqantosi, iGreat Rann yaseKutch inobungqina benkcubeko eqala kwixesha le-Indus Valley, yenye yezona ndawo zinkulu zeHarappan ezikulo mmandla waseIndiya. Kubonakala ngathi intlango yayingekho ngqwabalala njengoko ibonakala!
Kwaye xa ibonwa ngamehlo omhloli wamazwe, iziqwenga zetyuwa ngokuqinisekileyo ziya kubonakala zintle kakhulu kunegama lazo.
I-Rann yaseKutch yintlango yetyuwa enamabala amakhulu etyuwa asasazeka kubude obukhulu bomhlaba ngolwandle lwaseArabia. Ityuwa ivela kumaza olwandle enza ukuba indawo ibonakale ngathi isilika emhlophe ehonjiswe emhlabeni ngokokufikelela kwamehlo. Zininzi iintlango zetyuwa ezikhoyo emhlabeni, apho kwezinye zeendawo, ityuwa ibonakala imnyama kubume bayo ngenxa yobunzima bezinye izimbiwa.
I-Great Rann, eyinxalenye enkulu yeRann yaseKutch, likhaya kwiilali ezininzi ezikuloo ndawo. Kunzima ukuthelekelela ubomi kwindawo engaginyisi mathe njengaleyo yentlango, kodwa iilali zaseKutch zigcine iyantlukwano enkulu kwinkcubeko nakwindawo yokutya, into esikhumbuza ukuba ubuchule bokuyila abunyanzelekanga buxhomekeke kwiimeko ezijikelezileyo.
Indawo ethe tyaba egubungele umhlaba ngetyuwa kunye nezinye izimbiwa zenziwe ngokwendalo njengoko ityuwa ihlala kuwo onke amaza avela elwandle lwaseArabia, anokubonwa kude kakhulu. Njengoko ilanga likhanya kwiingubo zetyuwa umntu angamangaliswa ngulo mmangaliso ucacileyo wendalo.
Ukutyelela intlango kusenokungabi mnandi njengokuba kuvakala kodwa umnyhadala weentsuku ezintathu oququzelelwa minyaka le kwingingqi yeKutch kwiinyanga zasebusika ukusukela ngoDisemba ukuya kuFebruwari yenye yeendlela ezilungileyo zokujonga iipatches zetyuwa.
IsiXeko seTent saseKutch sisingatha abakhenkethi abaliqela minyaka le ukuze babone icala elinombala weGujrat. Ukutyelela kwisiXeko seNtente kuya kuthetha ukungqina ukutya, inkcubeko, indalo kunye nabantu bonke behlangene endaweni enye.
Ilali yaseDhordo ebekwe kwisithili saseKutch ibamba abakhenkethi kwilizwe liphela nakwamanye amazwe kwaye lolona khetho lufanelekileyo lokujonga indawo ngexesha lomthendeleko.
Iindawo ezinengca eyomileyo yomhlaba waseBanni zigcina indawo yabakhenkethi ukuba baphonononge inkcubeko yemveli kunye nokutya okuvela kule ngingqi kunye nohambo oluninzi kunye nezinto ezikhoyo kubathandi be-adventure.
URann Utsav okanye uMnyhadala weRann, njengoko ubizwa njalo, ubonakala njengothambiso lwazo zonke izinto ezintle ezivela eGujrat kwindawo enye. Njengomhambi yenye yeendlela ezilungileyo zokufumana indawo yasentshona yeIndiya.
Ngelixa ubugcisa kunye nezinto zokubamba ngesandla zidume kwiindawo ezininzi zaseIndiya ngobuhle bazo obucekeceke, ukuhonjiswa kwengingqi yeKutch kubukeka buhle nangakumbi njengoko amagcisa azisa ubugcisa obuntsonkothileyo bokuhombisa ngamatye kunye nezibuko.
Ubukhulu becala ezolukiweyo ngesandla ngabasetyhini ngamagcisa avela kurhulumente, amalaphu ahonjisiweyo aba ngumthombo wokuxhasa iindlela zokuziphilisa zoluntu ezithengiswa ekhaya kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe.
Eyona idumileyo kwaye intekenteke kumchako waseKutch obizwa ngokuba yiAari, wawenzelwe iintsapho zasebukhosini zikarhulumente ngamaxesha enkosana. Izibuko kunye namatye ayongezwa kwilaphu elihlala lilikotoni okanye ngamanye amaxesha isilika okanye i-satin.
Ukuhonjiswa kwe-Kutch sisipho sobuhle benkcubeko eya e-India evela kumagcisa esizwe aseGujarat. Ngokuqinisekileyo ubuhle bayo buya kwenza ukuba kube nzima ukukhetha oyithandayo kwivenkile!
Abahlali abaninzi beelali ezivela kwisithili saseKutch bathi bahlala bezibona ngezibane ezingaqhelekanga kumathafa anengca kufutshane neeflethi zetyuwa. Le nto iqatshelwe ikakhulu emva kobumnyama ibizwa njengoChir Batti kulwimi lwasekhaya okuthetha ukuthi ukukhanya kwesiporho.
Ukwenza okungaqhelekanga nangakumbi, abahlali babalisa amabali ezibane ezibalandelayo kwaye ukuba kwenzeka enye ukuzilanda kunokwenzeka ukuba ulahleke kwiiflethi zetyuwa zikaRann! Ewe, incwadi yakho yesayensi inokuthi ithathe nje ukukhutshwa kwayo kwe-photon.
Inkamela kunye neNyanga
Umnyhadala omangalisayo kaRann yeyona ndlela ibalaseleyo yokubonelela ngobuhle obunomtsalane bomhlaba ogqunywe ngetyuwa. Ilali yaseDhordo ebekwe kumda weIndiya nePakistan iba lisango lokufumana amanxweme etyuwa eKutch.
Iintsuku ezinde zeminyhadala kunye neminyhadala yomculo ebonisa inkcubeko yendawo kunye nokutya kupeyinta intlango eyomileyo ngemibala eqaqambileyo yaseGujarat kwiinyanga ezintathu zobusika.
Kukungqina ukukhanya kwenyanga njengoko isihla emhlabeni wetyuwa apho kuye kuthi kujongwe owona mbono ubalaseleyo, Into amehlo anokuyibamba ubomi bonke. Ndikhwele inkamela ngobusuku benyanga obupheleleyo ngelixa uhamba ngaphesheya komhlaba wesilivere onika ipanorama entle. Yintoni enye ebizwa ngokuba ngumlingo?